Faallo : Madaxwaye Gaasow aaway Iskushaandhayntaad ku samayn lahayd Golahaaga Wasiirada !! - BAARGAAL.NET
faallo gaas golaha wasiirada madaxwayne gaas opinion puntland
Faallo : Madaxwaye Gaasow aaway Iskushaandhayntaad ku samayn lahayd Golahaaga Wasiirada !!
✔ Admin on March 02, 2015
Waxa dhawaanahan aynu maqlaynay inay dhici doonto isku shaandhayn uu madaxwaynuha puntland prof. C/Wali maxamed cali Gaas damacsanyahay inuu ku sameeyo golihiisa wasiirada sanadka Cusub taas oo looga qaadaayo xilalka wasiirada ay wasaaradahooda ka muuqatay shaqo xumo, musuqmaasuq iyo waxqabad la’aan.
Golaha wasiirada xukuumada Puntland ayaa la sheegi jiray inay wadnaha farta ku hayeen Dabayaqadii Sandakii Tagay ee 2014 markii madaxwaynuhu La xisaabtanka adag ku hayay golihiisa wasiirada , Ayagoo qaar badan oo ka mid ah golaha wasiirada ay walaac weyn ka qabeen haddii madaxweynuhu isku shaandhayn ku sameeyo golaha wasiirada in xilalkooda ay wayn doonaan.
Taasi Ma dhicin oo ilaa hada ma jiraan warar rasmiya oo ka soo baxay madaxtooyada Puntland oo xaqiijinaya in madaxweyne C/wali Maxamed Cali Gaas isku shaandhayn doono golihiisa xukuumada ama isbadel Ku samayn doono.
Waxaana layswaydiinayaa sababaha keenay inuu Madaxwayne C/wali Maxamed Cali Gaas Ka noqdo ama dib u dhigto Isku shaandhayntaas asagoo Dareensan Ahamiyada ay leedahay wakhtigan Lagu jiro , oo Bulshadu ka sugaysay Madaxwaynaha inuu ku dhiirado run u sheegida masuuliyiinta Xilalkoodii kasoo bixi waayay oo aanu ka gabban sida hadda muuqata si Dawlada iyo Bulshaduba Dhinac looga soo wada jeesto xoojinta nabadgalyada iyo kobcinta Dhaqaalaha.
faallo|gaas|golaha wasiirada|madaxwayne gaas|opinion|puntland|